Ukukhusela i-Abc.xyz Ukudluliselwa koGawulayo - Iseluleko seNgcali evela kwiSemalt
I-Abc.xyz igama elidumile le-domain, eliyipropati yeAlfabhethi Inc. Ngenxa yezizathu ezingaziwa, eli gama lesizinda lihanjiswe njengegaxekile yi-Google Analytics. Ngaloo ndlela, inani elikhulu le-webmasters liyikhusele ngokusisigxina, kwaye kufuneka wenze okufanayo. Kuye kwaxelwa ukuba i-abc.xyz ivaliwe yinani elikhulu labaphathi bewebhu kwihlabathi jikelele. Oku kuye kwagalela idatha ye-Google Analytics kunye neenkqubo ezingenalo zangaphambili zokuthunyelwa kunye neendlela ezingekho mthethweni. Akuyi kuphazamiseka ukutsho ukuba yenye yezona ndawo zingozi ze-spamming sites and should not be open at any cost.
UJack Miller, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo we-10 (Semalt , uthi xa uhambele le URL, ikhonkco yayo iya kugcinwa kwisiphequluli sakho. Kwakhona, uqondisa abasebenzisi kumaphepha ewebhu anemiyalezo engaqhelekanga. Enye yale miyalezo ifundwa njengoko ivela kumsunguli kunye ne-CEO yeGoogle, uLarry Page, kodwa inyaniso kukuba akukho nto iyenzileyo kwaye kufuneka ivalwe ngokukhawuleza.
Ukuvimba i-URL kwi-Google Analytics
Le i-URL ethile isebenzisa inamba enkulu yamacacisa ukwenza ukuba ibonakale iyinyani kwaye ivumelekile..Uninzi lwabantu lufakela kwiindawo zabo kwaye lubone njengenkqubo efanelekileyo yokudlulisa, kodwa akunjalo. Oku kwenza i-traffichost kwi-site yakho, ilimaze idatha yakho imihla ngemihla. Ukukhusela le URL kwi-Google Analytics yakho yokuqala ibalulekile. Le URL ayikhuthazwa kwiiwebhusayithi ezinkulu kunye nababoneleli ngeenkonzo njengoko sele zidibene neentlobo ezininzi zokuhlaselwa kwe-phishing. Abagculeli kunye ne-spammers babandakanyeka abantu kwi-spam yokubhekisa kunye nokweba ulwazi lwabo. I-Abc.xyz iyindawo eyiyo ngokwayo, kodwa xa ihlanganiswa okanye ixhunyaniswa namanye amawebhusayithi, ayikwazi ukufumana iziphumo ezilungileyo.
Injongo kunye nenjongo yabasebenzisi be-spammers ekubhekiselele kukujolisa idatha kunye neefayile kwiwebhusayithi yakho. Bazama ukutsala abantu ngeqela lamaphulo okuphromotha. Bathi baya kukukhuthaza indawo yakho kwaye bafumane ukuvakashelwa okusemgangathweni, kodwa akunjalo. Phantse bonke abagaxekile be-spammer bakhupha umphumo wabo wokukhangela weGoogle ngokudala i-backlinks, basebenzisa iwebhusayithi yakho ukudala i-backlink ezinjalo kwaye kunokudala iingxaki kuwe. Ziyakhweba nge-Google index bots kwaye zizenza ngathi zenza umsebenzi egameni lakho.
Ingozi kwisayithi lakho
I-Abc.xyz i-Google Analytics spam yokuthutha ifuna ukulimaza indawo yakho kwaye inqande imilinganiselo yayo kwi-intanethi. Iphazamisa idatha yakho kwaye idala iingxelo ezikhohlisayo. Isinyathelo esilandelayo kukuba kukuthumelele ukutyelela kunye nokushaya ukuze i-Google Analytics ingathandabuzeki kuwe. Oku kukuchaphazela ezininzi iingxelo zakho kwaye kunciphisa umgangatho wezithuthi zakho. Ngoko, kubaluleke kakhulu ukuvimba le website kwaye ungabhalisi kwiinkqubo zayo kunye nokunikezela, kungakhathaliseki ukuba kuyamkeleka kwaye kuyamangalisa kangakanani. Kuza kufumana izinga eliphezulu lokuhlawula kwaye ujolise amagama akho angundoqo ukubeka isayithi zayo. Ukuze uyisuse, kufuneka udale izihlungi uze uyivimbele ngokulungisa izicwangciso zakho. Unokudala ngaphandle kokufakela iifayile zokukhulisa ukhuseleko lwakho lwe-inthanethi Source .